Obodo ntà nke Soria, ihe ịtụnanya nke ndị bi na Spain | Akụkọ Njem
Louis Martinez | | Getaways
Obodo ndị dị na Soria bụ nke a na-akpọ "Spain ọnụọgụgụ" ma ha ahapụbeghị ịrịọ arịrịọ maka nke ahụ. N'ezie, ụfọdụ n'ime obodo ndị a so na ndị kachasị mma na mba anyị ma ha kwesiri ka ị gaa.
Ndị a bụ obodo nwere ọmarịcha gara aga dịka Medinaceli, ebe a na-akọ agha dị ka Calatazaz ma ọ bụ dị na-agaghị ekwe omume eke gburugburu na-emegide ike ndọda dị ka rello. Kpamkpam mma nke ọdịdị ala ya na ịdị ebube nke ihe ncheta ya bụ isi ihe na-adọrọ adọrọ nke obodo Soria na-enye gị. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmata ha, anyị na-agba gị ume ka ị gụọ akwụkwọ.
1 Obodo ntà nke Soria, njem laghachi n'oge
1.1 Burg nke Osma
1.2 Calatañazor, agha dị egwu
1.3 Berlanga de Duero, gburugburu ebe obibi mara mma
1.4 Medinaceli, ọla ọzọ dị n’obodo Soria
1.5 Rello, ebe anaghi ekwe omume
1.6 Yanguas, ihe ijuanya n'etiti obodo ndị dị na Soria
Obodo ntà nke Soria, njem laghachi n'oge
N'ihi ya, ọtụtụ ihe nketa ihe nketa bụ obodo nke Soria na ileta ha yiri njem oge. Anyị enweghị ike igosi gị niile n’otu edemede. Ma jide n'aka na ndị anyị ga-ahụ bụ nke aka ha n'etiti ndị mara mma na mpaghara Soria.
Burg nke Osma
Obodo Episcopal mgbe ochie na Mgbanwe nke Artistical Historical Kemgbe afọ 1993, Burgo de Osma na-enye gị ọmarịcha Main Square Narị afọ nke XNUMX. Ma ị ga-eleta ya ikpọ Katidral nke Saint Mary nke Assumption, ya na nnukwu Gothic Portal. N'otu aka mara mma bụ Lọ ọgwụ ochie nke San Agustín, nke na-emegharị ụdị nke Alcázares de los Austrias.
Lọ ọgwụ ochie nke San Agustín
N'akụkụ aka nke ọzọ, Mahadum Santa Catalina Ọ bụ ọmarịcha ụlọ Plateresque nke tụgharịrị na họtel. Na, na mpụga obodo ị nwere foduru nke a ụlọ nke na-achịkwa mpaghara ahụ site na ụlọ nche. Na chọọchị Santa Cristina Ọ bụ a mara mma Romanesque ụlọ na Seminarị nke Santo Domingo de Guzmán bụ neoclassical ọrụ ruru ka Francesco Sabati.
Mana otu n'ime akara nke Burgo de Osma bụ Isi mmiri enwe, nke ị nwere ike iru site n'okporo ámá arcaded ndị na-ewu ụlọ nke ụlọ ndị a ma ama. Na villa nwekwara a Akwa mmiri Rome n'osimiri Ucero. N'ikpeazụ, obodo a bụ akụkụ nke ụzọ nke Zọ nke Cid, kpọmkwem nke ngalaba e mere baptizim dị ka 'El Desierro'.
Calatañazor, agha dị egwu
Obodo nta nke Calatañazor bụkwa otu n'ime obodo ndị kachasị mma na Soria, mana ọ bụ nke a ma ama maka agha a na-akọ n'akụkọ ifo, dịka okwu ahụ si kwuo, "Almanzor furu efu ya drum". Agbanyeghị na ejighị n'aka na ọgụ dị otu a dị n'etiti ndị ọchịagha ndị Alakụba na ndị nke Sancho García, o yiri ka ọ doro anya na Almanzor gbapụrụ wee nwụọ na nso nso Medinaceli, nke anyị ga-ekwu maka ya ma emesịa.
Anecdotes, Calatañazor nwere ezigbo ihe nketa. Ya ụlọ, echebeghị nke ọma ma bido na narị afọ nke iri na anọ. Ma, karịa ihe niile, ha onwe ha ụlọ obodo, nke ochie na-ewu na emi odude ke cobbled n'okporo ámá. Anyị na-adụ gị ọdụ ka ị hụ n'obodo a oyi kpọnwụrụ n'oge chọọchị San Juan na Nuestra Señora del Castillo.
Mana Calatañazor bukwara ama maka ya osisi junipa, oke osisi junipa mara oke mma nke mejuputara otu n'ime ihe ndi ozo di na mpaghara Soria.
Berlanga de Duero, gburugburu ebe obibi mara mma
Berlanga nwekwara nnukwu oghere okike. Ọ bụ ihe gbasara Heights nke Barahona nnukwu ala nkpuru ahihia nke calcareous na umu anumanu nke ekwuputala Ebe Mmasị Obodo y Mpaghara Nchedo Pụrụ Iche maka Nnụnnụ.
Yana ihe ịtụnanya a, Berlanga de Duero na-enye gị ọmarịcha ihe ụlọ site na narị afọ nke XNUMX na mgbidi ya. I nwekwara ike ịga leta obere mara mma Chọọchị Collegiate nke Santa María del Mercado, nke akwụkwọ ọnụahịa Renaissance ọ bụ ezie na ihe ịchụàjà nke Main Altar bụ Churrigueresque; ihe Obí nke Marquis nke Berlanga, dokwara Renaissance; ihe Paredes Albas ebe obibi na Hermitage nke Nwanyị Nwanyị nke Ọnọdụ.
Medinaceli, ọla ọzọ dị n’obodo Soria
Na njem anyị na obodo Soria, anyị rutere Medinaceli, nke jikọtara nnukwu ihe nketa ma na-etinye oghere ndị sitere n'okike. Nke a ezigbo ọla nwere ihe dị mkpa ndị Rom dị ka Mmaji ato na mosaics na Ogige Peter.
Ma o nwekwara ihe dị oke ọnụ ahịa Main Square na Palacelọ Ducal Dị Renaissance na Ọdịdị Narị afọ nke XNUMX. Ndị dị egwu Collegiate Church of Santa María de la Asunción, foduru nke a ụlọ na ebe obibi ndị mọnk nke Santa Isabel.
Ducal Obí nke Medinaceli
Ọzọkwa, na gburugburu Medinaceli bụ Layna na nkpọnkpọ ebe, Nke bukwa Ebe Mmasị Obodo y Mpaghara Nchedo Pụrụ Iche maka Nnụnnụ. Ma, na mgbakwunye, na a moo bụ paleontological na saịtị nke Ugwu Pelado, nke edepụtara na Lower Pliocene.
Rello, ebe anaghi ekwe omume
A maghị obodo a nke ọma dịka ndị gara aga, mana ọ ka kwesịrị ileta. Bụ a obodo nwere mgbidi nke dị n’elu ugwu. Ya mere, ha niile bụ ihe ncheta. N'ezie ọ na-ejide aha nke Akụ nke Mmasị Omenala. Ma ha pụta ìhè na Chọọchị nke Nwanyị Nwanyị nke Mwere, na Ebe obibi nke Las Angustias na Towerlọ elu Tiñón, ụlọ nche nke narị afọ nke XNUMX nke na-eche ụzọ ngafe site na Osimiri Duero.
Yanguas, ihe ijuanya n'etiti obodo ndị dị na Soria
Ọbụna obere ihe dị na mbụ karịa nke gara aga na sekit ndị njem nleta bụ Yanguas, nke, ọ bụ ezie na ọ bụ ezigbo ihe ịtụnanya. Gbara ya na oke ugwu nke Anoghi n'ulo oba nke Cidacos osimiri na iyi, na Sierra de Cameros, Yanguas nwere ihe nketa magburu onwe ya.
Ọ bụ nke ya mejupụtara ụlọ, ebe e wusiri ike nke oge ochie site na narị afọ nke XNUMX; ihe ọnụ ụzọ ámá nke Osimiri na Villa, foduru nke mgbidi ochie, na chọọchị nke San Lorenzo, ihe ebube nke Gothic. Ma kwa chọọchị Santa Maria, nke e wuru na narị afọ nke XNUMX; ihe Nnukwu ọnụ ụlọ obodo nke XVIII; ihe Mlọ elu San Miguel na ochie akwa n’elu osimiri Cidacos.
Ọnụ ụzọ ámá Yanguas
N'aka nke ọzọ, na gburugburu Yanguas na-akpali paleontological ebe dị ka nke Ihe ndia, Ebe i nwere ike ịhụ nkwụnye ego nke nzọụkwụ dinosaur.
Na mmechi, anyị egosila gị ụfọdụ obodo mara mma na Soria. Ma enwere ọtụtụ ndị ọzọ dịka Okwu, ya na nnukwu ụlọ ya nke Nava del Marqués na ụlọ ụka Gothic nke San Martín de Tours; Oncala, onye ụka ya nke San Millán nwere nnukwu ụlọ iri nke akwụkwọ Flemish, ma ọ bụ Vinuesa, tinyere akwa mmiri ya na ọmarịcha ya Ogologo oji. Ọ naghị adị gị ka ịgagharị ọmarịcha mpaghara Spanish a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways » Obodo nke Soria
Ihe ị ga-eme na Cuzco (Peru): ntuziaka bara uru maka ọbịbịa gị n’obodo ahụ